जयपुरमा भेटिए भगवान रामका सन्तान, दिए तीनओटा प्रमाण
प्रकाशित मिति : २०७६ श्रावण २६ आइतबार
काठमाडौं । अयोध्या विवादबारे अहिले भारतको सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई चलिरहेको छ । ९ अगष्ट मा अदालतले रामललाका वकिलसँग रामको कुनै वंशज अयोध्यामा छ कि छैन ? भनी प्रश्न गरेका थिए । यस विषयमा वकिलले आफूलाई जानकारी नभएको बताएका थिए ।
तर, अयोध्याको राजपरिवारले भने आफूहरु भगवान रामका छोरा कुशको सन्तान रहेको दाबी गरेका छन् । यो कुरा इतिहासमा पनि उल्लेख छ । पूर्वराजकुमारी दीयाकुमारीले यसको केही प्रमाण पनि दिएकी छिन् । उनले दिएको प्रमाणमा रामको २ सय ८९ औं वंशज जयसिंह र ३ सय ७ औं वंशजको रुपमा महाराजा भावानी सिंहको नाम उल्लेख छ ।
दीयाकुमारीले दिएका प्रमाण–
१. जयपुरका महाराजा सवाई जयसिंह भगवान रामका छोरा कुशका २ सय ८९ औं वंशज हुन् ।
२. ९ दस्तावेज, २ नक्शाले अयोध्याका जयसिंहपुरा रामको जन्मस्थान सवाई जयसिंह द्वितीयको अधीनमा थिए ।
३. सन् १७७६को एक निर्देशनमा जयसिंहपुराको भूमि कुशुवाहको अधिकारमा रहेको उल्लेख छ ।
सिटी प्यालेसका ओएसडी रामू रामदेवका अनुसार कुशुवाह वंशका भगवान रामका छोरा कुशको नामबाट कुशवाहा वंश मानिँदै आएको हो । यसको वंशावली अनुसार ६२ औं वंशज दशरथ, ६३ औं वंश श्रीराम र ६४ औं वंश कुश थिए ।
सवाई जयसिंहले सन् १७१७ मा अयोध्यामा मन्दिर पनि बनाएका थिए । जयपुर राजघरानाकी पूर्व राजमाता पद्मिनी देवीले राम मन्दिरको समस्या तत्काल समाधान हुनुपर्ने बताएकी छिन् । उनले भगवान रामको वंश आफूहरु रहेको र त्यसले अहिले अगाडि आएको उनले बताइन् । उनले राम सबैको आस्थाको केन्द्र रहेको पनि उल्लेख गरेकी छिन् ।
भगवान रामको मृत्यु
भगवान श्रीरामको जब समय पुरा भयो। उहाँको गमनको समय आयो । आकाशवाणी भयो, 'प्रभु तपाईले आफ्नो अवतारमा आफ्नो सबै लिला गर्नुभयो । जुन तपाईको अभिप्राय थियो संसारलाई बचाउने, सन्तको रक्षा गर्ने त्यो अभिप्राय पुरा भएको छ । अब तपाईको जाने समय आयो ।'
तब भगवानले भन्नुभयो, 'मैले बुझे '। प्रभु श्रीरामले भन्नुभयो,'जुन कार्यको हेतु म यहाँ आएको थिए त्यो पुरा भयो । अब मेरो जाने समय भयो । तपाई यमराजलाई भन्न सक्नुहुन्छ यमराज आउन् ।'
यमराजले भने, 'प्रभु म कसरी आउन सक्छु तपाईको अयोध्यामा । अयोध्याको ढोकामा त हनुमान बसेका छन् । जहाँ हनुमान छन् त्यहाँ यम प्रवेश गर्न सक्दैन । यमराज आउन सक्दैन । तपाईको अयोध्या यस्तो छ अ माने हुदैन योध्या माने लडाइ नै नहोस ।' श्रीराम राजयमा कुनै झै झगडा हुदैन थियो । त्यहाँ प्रकृतिको सन्तुलन थियो ।
भगवान् श्रीरामले भन्नुभयो, 'ठिक छ यदि हनुमान अयोध्याको ढोकामा पहरा दिइरहेका छन् र रक्षा गरिरहेका छन् भने म हनुमानलाई कहि पठाउछु। तब तिमी आउनु ।'
तब भगवानले औठी निकाले र हेर्नुभयो महलको एक ठाँउमा चिरा परेको थियो । त्यो चिरा भित्र ‌औठी फालिदिनुभयो । तब श्रीराम भन्नुहुन्छ, 'हनुमान जी मेरो औठी हरायो मेरो औठी खोजेर ल्याउनुहोस ।'
हनुमान जीले भन्नुभयो, 'प्रभु तपाईको आज्ञा । म औठी खोजेर ल्याउछु ।'
हनुमानले आफ्नो रुपलाई सुक्ष्म बनाउनुभयो । हनुमानमा यस्तो क्षमता थियो यस्तो सिद्धि थियो । आफ्नो प्रभुको सेवा गर्दा गर्दा उहाँ भित्र यस्तो सिद्धि भयो कि उहाँ अणु पनि बन्न सक्नु हुन्यो भने माइक्रो कजम म्याक्रो कजम पनि ।
जस्तै एटमको भित्र इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन र प्रोटोन एक माइक्रो कजम हुन्छ । त्यस्तै ब्रम्हाण्डमा सुर्य छ त्यसको चारैतर्फ ग्रहहरु घुमिरहेका छन् । त्यहाँ सन्तुलन बनेको छ ।
हनुमान सुक्ष्म सिद्धिले सुक्ष्म शरीरको रुपमा चिरा भित्र पस्नुभयो । लामो यात्रापछि उहाँ नाग लोक पुग्नुभयो। त्यो चिरा जुन थियो त्यो नाग लोकको मार्ग थियो । नाग लोकमा बासुकीले देख्नुभयो हनुमान आएको । बासुकीले हनुमानको स्वागत गर्नुभयो ।
बासुकीले भन्नुभयो , 'तपाई प्रभु श्रीराम भक्त हुनुहुन्छ तपाई आउनुको प्रयोजन भन्नुहोस । कृपया भन्नुहोस तपाई किन आउनु भयो । के कारण तपाई आउनुभयो । म तपाईको दर्शन पाएर कृतार्थ भए ।'